Buuraha Giant, Lysa hora, Poland - PetrPikora.com
PetrPikora.com on Janaayo 11, 2018
Buuraha Weyn (Jarmal Riesengebirge, Polish Karkonosze) waa wadarta geomorphological iyo buuraha ugu sarreeya ee Czech iyo Highlands. Waxay ku taala waqooyi bari Bohemia (qaybta galbeed waxay ku taala gobolka Liberec, qaybta bariga ee Královéhradecký) iyo koonfurta qaybta Polish ee Silesia. Buurta ugu weyn ee Buuraha Giant waa Sněžka (1603 m). Sida laga soo xigtay wargaysyada, Krkonoše Mountains waxay ilaaliyaan ruuxa maskaxda ee Krakonoš. Waa mid ka mid ah meelaha ugu caansan buuraha Czech.
buurta ballaaran oo dhan oo ay ku jiraan Giant ee hore u joogay ee Qarniyadii tilmaamay Sudetenland ah, kuwaas oo u badan tahay waa magaca asalka Celtic (inta badan tarjumay sida iska daaqda ugaadha buurta) ama asal Balkan (tarjumay sida Ri Mountain). Blotemigii (oo ku saabsan 85-165) loo isticmaalaa maanta Sudetenland magacyada Sudetayle (Mountains Ore) iyo Askiburgion (gaar ahaan buuraha, oo u dhow magaalada Askiburgium kharibaad ah, laga yaabee in Lusatian Mountains, oo ay ku jiraan Mountains Giant ah). Dio Cassius ee 3. qarnigii hore wuxuu isticmaalay magaca Vandalski Mountains for Askiburgion. Ka dib markii maps Ptolemaic si dhagaxa Czech Republic Bohuslav Balbin iyo Pavel yimid xagga sare isticmaalaya magaca dheeraad ah oo Sudetenland in askartii oo dhan (17 Century.).
Buuraha Krkonose ayaa loo yaqaan "Bohemian Forest" oo ku yaal waraaqaha Ruushka ee 1095, iyo Snowflake in 1380 loo yaqaan "Snow Mountains".
Magaca Mountains Giant asal ahaan labada maanta sare ee Kolo iyo kuleeliyaha ama Kokrháč. Calaamadaynta Mountains Giant ah (keli ahaan haweenka ", ka" Giant Mountains) si ay u xigtaa ay u muuqataa in 1492 diiwaanka Qaybta Štěpanice xaafadda on Wallenstein iyo Jilemnický qayb 1499 markaas u lahaa wax falniin Vladislav II., Map ugu faca weyn badbaaday magaca in shaqeeyay Nicholas Klaudyan ee 1518. Wenceslaus Hajek in uu qoraal taxane-taariikheed ee 1541 isticmaalo magaca Czech iyo Silesian Giant Mountains.
caddaynta hore ee dheeraad ah ee magaca buurta dhan waa ka 1517 marka horyaalka uu yahay buuraha Krkonošské, Mountains Giant qorniinkan tiradaasi Ibliisku complement. Magaca la soo gaabiyey ee Mountains Giant waa markii ugu horeysay ee lagu qoro 1601. Magaca waxaa inta badan loo arkaa in ay derivative ka mid ah jirka ah Slavic salka "qoorta" ama "cracker", taasoo la micno ah geed cilin ama buurta metsys, Josef Jungmann waxaa lala magaca Germanic ama Celtic qabiilka Corconti ama Korkontoi, ku xusan by Blotemigii, la male ah in uu u soo sheegnay buuraha Asciburgius ahaa isku maanta Giant Buuraha (Korkontoi ma u leeyihiin in ay meel kasta ku nool meel u dhow ilaha ugu Vistula, ama halkii Beskydy). Qaar ka mid ah cilmi-baaris u fasiro asalka ah ee magaca ku salaysan hoggamiye, taasoo la micno ah "jiirada dhagax, beerta dhagax" iyo soo jeedin link leh magaca buuraha Yukreeniyaan Gorgany in Carpathians Bari.
u dhigma Jarmal (Czech iyo kooxda Silesian buuraha ahaa ilaa 1945 deggan yahay tirada ugu badan ee Jarmalka) la macnaha Mountains Giant (Riesengebirge, Giant Mountains ee English) ka yimaadaa magaca Risenberg, oo Agricola (Georgius?) In 1546 calaamadeeyay in xagaaga. Tirada buuxda ee Riesengebirge ee xadka buurta oo idil waxaa marka hore lagu diiwaangeliyaa 1571.
Saldhig u ah qaabka joolaji wuxuu ka kooban yahay horey u-soo-saarka kiclada iyo dhagaxyada metamorphic-ka ee horay loo yaqaan (keligood). Qeybta bariga ee xadka buurta, xumbadu waa dhif. Crystallinic qadiimka ah ayaa ku dhexjirta meelaha qaarkood iyo Krkonoše-Jizerský pluton (granite). Buuraha duufaantu waxay ahaayeen kuwo barafayaal ah oo qaabeeyey baadiyaha. Waxaa jiray laba nooc oo baraf ah. Kii hore wuxuu ahaa oogada dooxada dooxada ah, tan labaadna waxay ahayd nooca Scandinavian. Dhulka ballaaran (buurta Ibliiska, iwm.) Wuxuu ku leeyahay miisaankiisa asalkiisa. Wixii fikrad fiican, waxaanu eegi karnaa jareeraha Scandinavia taas oo muujineysa sida ay u socoto Giant Mountains wuu arki karaa. Tusaalaha ugu wanaagsan ee hawlaha maskaxdu waa, tusaale ahaan, Elbe Mine ama Giant Mine, oo ah dooxo ay sameeyeen jinniyo (troges). Waxyaabaha kale ee macdanta glacial-ka ah waa barxanuunno (v Giant Mountains waxaa loo yaqaan karyas "pits"). Tixgalin waa boorsada boorsada iyo godadka barafka ee Poland. Kary waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu qaalisan ee aan sameyn karno Giant Mountains sababtoo ah waxay yihiin naadiga ugu caansan ee buuraha weyn. Waxqabadka cryogenic v Giant Mountains waxaa lagama maarmaan ah in la soo sheego, tusaale ahaan, baaskiil ballaaran (buuraha sare) ama xargaha dusha la dhigo.
Xuduudaha Buuraha Giant waxaa jira noocyo xasaasi ah oo noocyada dhirta iyo xoolaha ah. V Giant Mountains waa meelaha ugu weyn ee ka sarreeya xadka sare ee kaynta ee Jamhuuriyadda Czech. Dharka dhererka 1200-1300 m suunka kaynta wuxuu ku dhamaanayaa halkan. Xagga sare ayaa ah dhulgariirkii dhulgariirka, askari, dhagax iyo boodhkii. Baadhitaankan aad dhif u ah waxaa lagu magacaabaa tundra arc-alpine. Meelaha qaarkood xitaa waxaan helnaa bogag cagaaran. Koritaanka xorta ah ee kiniisiga ah ayaa qayb ahaan burburay saamaynta cimilada hawada. Meelaha hoose, kalluunka iyo monocultures ayaa koraan. Malacofauna ee Buurada Giant waxaa ku jira noocyada 90 ee molluscs.
On dhulka Mountains Giant ku yaalo goobta Seeraha Qaranka ee Mountains Giant (KRNAP) ee 36 400 ha, kuwaas oo lagu dhawaaqey sanadkii 1963 ah, iyo Karkonoski Park Narodowy (KPN), aasaasay 1959. Goobta ilaalinta ee jardiinada qaran waxay leedahay cabbirka 18 400 ha ee ku yaala dhinaca Czech. Mountains ayaa sidoo kale tan iyo 1992 gooni gooni Biosphere Reserve by Waxbarashada ee Qaramada Midoobay, Sayniska iyo Dhaqanka (meelaha ka mid ah Czech oo ka mid ah ha 54 800) naadiyey. KRNAP waxay u qaybsan tahay I, II. iyo III. aagagga ilaalinta, halkaasoo aagga 1aad uu yahay kan ugu qiimaha badan, waxaana ugu habboon ilaalinta nidaamka badbaadada ugu adag. Tan macnaheedu waa, tusaale ahaan, tallaabooyinka halkaa ku yaalla I iyo II. aagga waa laga mamnuucay in uu ka baxo waddooyinka dibedda iyo barafka. On dhulka Mountains Giant waxaa sidoo kale loo magacaabay Bird Area iyo Bird Area muhiim ah, kaas oo daboolaya reserve ee biosphere oo dhan, siday u kala horreeyaan. beerta qaranka oo ay ku jiraan aagga ilaalinta.
Buuraha Weyn ayaa ka soo jeeda dhinaca cimilada ah ee aragtida buuraha ugu badan ee buuraha ku yaala Czech Republic. Shirarka kor ku xusan ee 1400 x ee xuduudaha ayaa la barbardhigayaa Xeebta Cagaaran. Heerkulku wuxuu ku xiran yahay heerka ugu sarreeya. Tusaale ahaan, heerkulka celceliska ee Trutnov waa 6,8 heerka Celsius, halka Sněžka, oo ah meesha ugu qabow ee Krkonoše, celceliska heerkulka sanadlaha waa 0,2 heerka Celsius. Isla mar ahaantaa, waa meesha ugu qabow ee Jamhuuriyadda Czech. Xaddiga roobabka ee Buuraha Weyn waxay ku xiran tahay jihada sare iyo jihada. Xaqiiqadu waxay tahay in saldhigyada Buuraha reer Galbeedka ay leeyihiin roobab badan oo ka badan taayirrada ku yaala Buuraha Giriiga ee Bariga inta lagu jiro sanadka dhexdiisa, sababta oo ah socodka hawada reer galbeedka ah ayaa ka baxsan Jamhuuriyadda Czech. Roobabku intooda badani waxay ku dhacaan bilaha xagaaga inta lagu jiro duufaanka iyo roobabku ugu yaraa bisha Maarso, laakiin sababtoo ah tirada barafka badani waa wax aad u yar. Inkasta oo Buuraha Giriigtu yihiin buuraha ugu sarreeya ee jamacada Czech, uma muuqato inay ugu dhib badan tahay waayo buuraha Krkonoše waxay ku yaallaan roobabka Jizera. On the cabsida, qadarka roobka waa saabsan 1300 mm / sanad, halka dooxada waxay noqon kartaa ilaa 1500 mm / sano. Qayb kale oo ka mid ah roobabku waa dabiici baraf, taas oo ah qayb muhiim ah oo ka mid ah Buuraha Giant. Celceliska, taariikhda barafka ugu horeeya ee Krkonoše Mountains lama sheegi karo sababtoo ah waxay baraf ku dari kartaa wabiga ku dhowaad sanadka oo dhan. Daboolka barafka ayaa ku yaal cirifka celceliska laga bilaabo bartamihii Nofeembar ilaa Maajo. Barafka ugu weyn ee barafku wuxuu ku yaalaa duufaan yaryar (Khariidadda dalka oo barafka gaadhaya ilaa mitirka 15!). Badanaa Buuraleyda Giant dabayl xoog leh oo dabaysha (xawaaraha sare ee dabaysha lagu qiyaaso Sněžka 216 km / h).
dji mavicdronedroneMountainskvadroptéraTariinLysa Horaskiingmavicgawaaridameesha baabuurta la dhigtophantomphantom 3phantom 4Polandski miciinkaskipashoygashootalika sarraysayna
Saacadda 8 horaantii